LXQT: waa maxay sideese loogu dhejiyaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19? | Laga soo bilaabo Linux
LXQT waa nal kale oo dhakhso badan Deegaanka Desktop, walaal LXDE Iyo sida tan dambe, badiyaa ma jiraan macluumaad fara badan oo ku saabsan webka marka la barbar dhigo kuwa kale ee caanka ah ee la isticmaalay. Tusaale ahaan, noo qoraalkii ugu dambeeyay cadee ku saabsan LXQT, waxay ahayd in ka badan 5 sano ka hor, on the nambarka nooca 0.9.0.
Sidoo kale, sida la socota Lxde, badiyaa way yar yihiin Qaybinta GNU / Linux intaas waxaa ka mid ah sida Degaanka desktop-ka oo ah Default. Sidaa darteed, qoraalkan waxaan diiradda saari doonnaa gaar ahaan Maxay tahay? y Sidee u rakibtaa?. Adkeynaya, dabcan, hada DEBIAN GNU / metadistribution Linux, ee ugu dambeeyay version, ka lambarka 10, magaca summada Buster. Kaas oo sidoo kale hada aasaas u ah qaybinta MX-Linux 19 (Duckling xun).
"LXQt waa jawi desktop fudud oo Qt ah. Wadadaada kuma soo dhacayso. Ma burburi doono ama hakin doonin nidaamkaaga. Waxay diiradda saareysaa inay noqoto miis qadiimi ah oo muuqaal casri ah leh. LXQt horey ayaa loogu soo daray inta badan qeybinta Linux iyo BSD, marka waad isku dayi kartaa nidaamkaaga caadiga ah ama VM. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan rakibidda waxaa laga heli karaa LXQt Wiki ee GitHub. Taariikh ahaan, LXQt waa wax soo saarka isku biirista udhaxeysa LXDE-Qt, dhadhanka bilowga ah ee LXDE's Qt, iyo Razor-Qt, mashruuc ujeedadiisu tahay in lagu horumariyo Degaanka Desktop-ku saleysan Qt ujeedooyin la mid ah kan hadda LXQt. LXQt waxay ahayd inuu noqdo bedelka LXDE maalin uun, laakiin laga bilaabo 09/2016 labada deegaan ee desktop-ka ah way sii wadayaan inay wada noolaadaan hadda "Ku saabsan" qaybta bogga rasmiga ah ee LXDE
1 Dhammaan wixii ku saabsan LXQT
Dhammaan wixii ku saabsan LXQT
Lxde la sii daayay qayb ahaan sanadka 2013 waxaa qoray saynis yahanka reer Taiwan Hong Jen Yeey Markii la dhammeeyay PCManFM-Qt, moduleka ugu horeeya desktop QT. Waqti badan, desktop-ka oo dhan LXQT, iyada oo ujeedadu tahay in la helo a cusub, Casri ah oo miisaankeedu yahay Desktop Deegaanka waayo, tamar yar iyo qaybinta kheyraadka, iyadoo aan gebi ahaanba laga tagin horumarka Lxde.
LXQT waxaa badanaa lagu sameeyaa gudaha QT5 iyo qaybaha kale ee ku jira Qaab-dhismeedka KDE 5. Haddana way maraysaa 0.14.1 version (xasilloon) Noockeedii ugu horreeyay oo dhammaystiran wuxuu ahaa 0.7.0, oo la sii daayay 7-dii Maajo, 2014, oo ah badeecaddii ugu horreysay ee midowga mashruuca Feeraha-Qt y Lxde.
LXQT waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo keyd rasmi ah in badan GNU / Linux Distros, sida: DEBIAN, Ubuntu iyo Fedora. Qaarkoodna waxay ku keenaan si aan caadi ahayn markay diirada saaraan kooxaha adeegsiga ilaha yar.
El nidaamka deegaanka u dhashay LXQT Waxay ka kooban tahay barnaamijyo dhowr ah, kuwa soo socdaa waa kuwa ugu astaanta ama caan ah: PCManFM-Qt (Maamulaha faylka), Leafpad-Qt (Tifatiraha qoraalka), LXImage-Qt (Sawirka Sawirka), iyo kuwo kale oo badan.
Waxay bixisaa jawi miis fudud oo isku dhafan, waxtar u leh kombiyuutarada leh ilaha xusuusta ee CPU iyo RAM xadidan ama waxqabadkoodu hooseeyo Intaas waxaa sii dheer, way fududahay in la isticmaalo dad badan, mahadsanid a interface indhaha qabanaya laakiin leh astaamo dhaqameed.
Sidoo kale waxaa ilaaliya a bulshada horumarinta caalamiga ah, qaar badan oo ka mid ahi la shaqeeyaan Lxde.
Qaybaheeda waxay haysaa falsafada qaabaysan ee saldhigeeda LXDE, taasi waa, waxaa loo isticmaali karaa si madax bannaan iyaga u gaar ah Deegaanka Desktop LXQT.
Ma laha maamul daaqad u gaar ah, laakiin waxaa badanaa loo isticmaalaa badanaa Furo furan. In kasta oo is dhexgalka ay la XFWM y Muffin.
Waxay leedahay a Interface interface Classic inkasta oo ay suurtogal tahay salka ku haysa Qaab dhismeedka QT5 iyo KDE 5.
Waxay ku jirtaa horumar buuxa oo aanu gaadhin taada nooca ugu horreeya ee qaangaarka ah (1.0) laakiin beeshiisa ayaa si joogto ah u kordheysa maadaama saldhigiisa uu leeyahay awood badan oo uu bixiyo.
Websaydhka rasmiga ah ee mashruuca LXQT
Halka aad ka heli karto qaybaha rasmiga ah ee rasmiga ah, sida a Blog, -Leaks iyo Madasha, iyo kuwo kale oo badan. Xiriirimaha soo socda ayaa sidoo kale la heli karaa si loogu kabo macluumaadka Lxde:
Xullo Deegaanka Desktop LXQT iyo wixii kale ee koronto ama baakado dheeri ah.
Nota: Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa a Desktop Environment ku saleysan LXQT fudud iyadoo la beddelayo xirmada lxqt by lxqt-core.
Dib u bilow oo soo gal adoo dooranaya Deegaanka Desktop LXQT, haddii ay dhacdo inaad haysato wax ka badan hal Deegaanka Desktop rakibay oo aanad dooran Maareeyaha Soo-gal lxqt-session.
Xusuusnowna, kani waa kii ugu dambeeyay iyo booska lixaad taxane ah oo ku saabsan Goobaha GNU / Linux Desktop. Kuwii hore waxay ku saabsanaayeen GNOME, KDE Plasma, XFCE, Qoraxda, MATE y Lxde. Kuwa kale oo badan ayaa jira Degaanada Desktop waxay u badan tahay inaan ku baari doonno qoraalada kale ee mustaqbalka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Entorno de Escritorio» lagu yaqaan magaca «LXQT», walaal «LXDE», laakiin faraqa u dhexeeya, waxaa lagu qoray Teknolojiyada «QT», halkii «GTK+2», waxay leedahay miis taariikhi ah oo muuqaal casri ah leh oo aad u yar in la isticmaalo / lagu yaqaan adduunka dhexdiisa «Distribuciones GNU/Linux», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » LXQT: waa maxay sideese loogu dhejiyaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19?
Markii iigu dambaysay ee aan isku dayo LXQt Debian 10 waxay lahayd qaar ka mid ah codsiyada Xfce iyo curiyaha Xfwm iyo maamulaha daaqada Aniga iima muuqan inaan si fiican isugu dhafan yahay. Apper ma raraynin astaamaha iyo ogeysiiska ogeysiiska ayaa la waayey.
Dhinaca kale, isla distro-ka leh Plasma wuxuu cunaa wax isku mid ah ama ka yar. LXQt wuu miyir daboolmay.
Salaan, Autopilot. Ilaa iyo hada oo aan la joogo LXQT in ka badan 15 maalmood, ma arag wax dhibaato ah ama gaabis ah. Waana mid aad u qurux badan oo shaqeynaya. Isku day mar labaad si aad u aragto waxa aad hadda u malaynayso.
Noocee ayaa lagu rakibay debian?
0.14.1 ama 0.12
Ku jawaab argemiro
Farxad! Argemiro. Isticmaal 0.14.1. Waad ku mahadsantahay faalladaada.
Ka maamul Console ama Terminal ka Degaanka Degaanka
Orod amarrada amarka xiga:
ku rakib hawl qabad
taskel rakib lxqt-desktop –cusub-rakib
Ku sii soco ilaa dhamaadka Nidaamka La Hagayo Tasksel (Xuliyaha Hawsha).
Orod Console ama Terminal adoo isticmaalaya furayaasha Ctrl + F1 oo bilow fadhi xidid adeegsi super ah.
Xulo Deegaanka LXQT Desktop iyo wixii kale ee koronto ama baakado dheeri ah.
Ku sii soco ilaa dhamaadka nidaamka hagista ee Tasksel (Xuliyaha Hawsha).
Waa la rog rogay miyaanay ahayn?
OpenWifi, waa mashruuc il furan oo lagu fulinayo Wi-Fi oo ku saleysan FPGA iyo SDR